Yurub iyo Afrika oo ka heshiiyay qalalaasaha Muhaajiriinta (Sawiro) | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Yurub iyo Afrika oo ka heshiiyay qalalaasaha Muhaajiriinta (Sawiro)
Yurub iyo Afrika oo ka heshiiyay qalalaasaha Muhaajiriinta (Sawiro)
Kulankii labadii maalmood ee lasoo dhaafay dalalka Midowga Afrika iyo Midowga Yurub uga socday wadanka Ivory Coast ayaa laga soo saaray qorshe cusub oo ku aadan dadka Tahriibayaasha ah ee ku dhibaateysan wadanka Liibiya.
Shirka Ivory Coast ee AU iyo EU-da ayaa ahaa in diirada lagu saaro iskaashiga iyo horumarinta ayaa waxaa hareeyey xiisada ka dhalatay xaalada qalafsan oo ay ku sugan yihiin dadka tahriibayaasha Afrikaanka ah ee ku xiran wadanka Liibiya.
Qorshaha cusub ayaa lagu sheegay in ay iska kaashan doonaan Midowga Afrika, Eu-da iyo dowlada Liibiya sidii dalalkooda dib loogu celin lahaa dadka Tahriibayaasha ah ee ku xaniban wadankaasi.
Waxaana lagu wadaa in la dhiso koox khaas ah oo la dagaalami doonta kooxaha ka shaqeysta Tahriibayaasha oo ay Soomaalida u taqaan “Magafe”, sidii loo burburin lahaa xarumaha ay dadka ku xareystaan ama ku kala iibsadaan iyo sidii sharciga loo horgeyn lahaa dadka geysta gabood falada ka dhanka ah dadka doonaya inay u safraan qaarada Yurub.
Arrinta tahriibta ayaa markale noqotay mid si weyn loo hadal hayo kadib markii dhawaan telefishinka CNN faafiyey muuqaal qarsoodi ah oo laga soo duubay sida dadka Tahriibayaasha Afrikaanka ah loo kala iibsado wadankaasi Liibiya, taasi oo dalal badan oo Afrikaan ah soo xasuusisay ganacsigii iyo adoonsigii lagula dhaqmi jiray Afrikada Madow qarniyadii hore.
Xoghayaha Qaramada Midoobay Antonio Guterres oo ka qeyb galay shirka Midowga Afrika iyo Yurub, ayaa sheegay in xalka uusan ku koobneyn la dagaalanka kooxaha Tahriibta ka ganacsada, balse loo baahan yahay in sidoo kale wax laga qabto sababta ay dadka u badan dhalinyarada wadamadooda hooyo uga soo tahriibayaan.
Antonio Guterres ayaa sheegay in loo baahan yahay in la xoojiyo sidii shaqo loogu abuuri lahaa dhalinta Afrika si wadamadooda ay nolol fiican uga sameystaan, sidoo kale wax laga qabto arrimaha kale ee ku khasbaya inay u tahriibaan Yurub.
Previous articleDowladda oo war ka soo saartay xaaladda Soomaalida Libya
Next articleAbuu Masuur oo Baydhabo lagu soo dhoweeyay (Sawiro)